अध्याय ७४ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जसले मेरा वचनहरू पढेका छन् र ती पूरा हुनेछन् भनी विश्‍वास गर्छन्, तिनीहरू आशिषित् हुन्। म तँलाई बिलकुलै दुर्व्यवहार गर्नेछैन; म तैँले विश्‍वास गरेका कुराहरूलाई तँमा पूरा गराइदिनेछु। यो तँमा आउँदै गरेको मेरो आशिष् हो। मेरा वचनहरूले हरेक व्यक्तिमा लुकेका रहस्यहरूलाई प्रहार गर्नेछन्; हरेक व्यक्तिसँग प्राणघातक घाउहरू हुन्छन् र म ती घाउ निको पार्ने कुशल चिकित्सक हुँ: केवल मेरो छेउ आइज। मैले किन भविष्यमा कुनै पनि दुःखकष्ट वा कुनै पनि आँसु हुनेछैन भनी भनेँ त? मैले यही कारणले भनेको हुँ। ममा सबै थोक सिद्ध छन्, तर मानिसहरूमा सबै थोक भ्रष्ट, रित्तो र मानिसहरूप्रति धोकापूर्ण छन्। मेरो उपस्थितिमा, तैँले सबै थोक प्राप्त गर्ने कुरा निश्चित हुन्छ, र अवश्य नै तैँले आफूले कहिल्यै कल्पना पनि गर्न नसकेका आशिष्‌हरू देख्न र उपभोग गर्न सक्नेछस्। मेरो सामु नआउनेहरू निश्चय नै विद्रोही स्वभावका छन्, र तिनीहरू पूर्णतया मेरो प्रतिरोध गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। म तिनीहरूलाई हल्‍कासित जान दिनेछैन; म त्यस्ता मानिसहरूलाई गम्भीर रूपमा सजाय दिनेछु। यो कुरा याद राख्! मानिसहरू जति धेरै मेरो सामु आउँछन्, तिनीहरूले त्यति नै धेरै प्राप्त गर्नेछन्—तैपनि त्यो केवल अनुग्रह मात्र हुनेछ। पछि, तिनीहरूले अझै ठूला आशिष्‌हरू पाउनेछन्।
संसारको सृष्टि भएदेखि नै मैले मानिसहरूको यो समूहलाई चुन्ने र तिनीहरूको नियति पूर्वनिर्धारित गर्ने काम सुरु गरेको हुँ—नामै लिँदा, आजका तिमीहरूलाई। तिमीहरूको मनोभाव, क्षमता, रूप, र कद, तिमीहरू कुन परिवारमा जन्म्यौ, तेरो जागिर, र तेरो विवाह—तेरो सम्पूर्णतामा तँ, तेरो कपाल र तेरो छालाको रङ्ग, र तेरो जन्मको समय लगायत—सबै कुराहरू मेरा हातहरूले बन्दोबस्त गरेका थिए। मैले आफ्नै हातले तैँले हरेक दिन गर्ने कुराहरू र भेट्ने मानिसहरूको समेत बन्दोबस्त गरेँ, र तँलाई आज मेरो छेउमा ल्याइएको तथ्य पनि वास्तवमै मेरो बन्दोबस्तद्वारा गरिएको हो भनी उल्लेख गरिरहनु नपर्ला। आफूलाई अस्तव्यस्ततामा नफाल्; तँ शान्तसँग अघि बढ्नुपर्छ। मैले तँलाई जे उपभोग गर्न दिएको छु त्यो तँले पाउनैपर्ने तेरो हिस्सा हो, र यसलाई मैले संसारको सृष्टि भएदेखि नै पूर्वनिर्धारित गरेको हुँ। मानिसहरू सबै अत्यन्तै चरम अवस्थामा पुगेका छन्: तिनीहरू कि त अत्यन्तै हठी कि त पूर्ण रूपमा लाजहीन छन्। तिनीहरूले मेरा योजना र बन्दोबस्तहरू अनुरूप काम-कुरा गर्न सक्दैनन्। अबउप्रान्त यस्तो नगर्। ममा सबै थोक मुक्त छन्; आफूलाई नबाँध्, किनकि यसबाट तेरो जीवनसम्बन्धी कुराहरूमा हानि हुनेछ। यो कुरा याद राख्!
सबै कुरा मेरै हातमा छ भनेर विश्‍वास गर। विगतमा तिमीहरूका निम्ति जुन कुरा रहस्यहरू थिए, आज ती सबैलाई खुलस्त प्रकट गरिएका छन्; ती उप्रान्त लुकेका छैनन् (किनभने मैले भनेकै छु, भविष्यमा कुनै कुरा पनि लुकाइनेछैन)। मानिसहरू प्रायजसो अधीर हुन्छन्; कामकुराहरू पूरा गर्नको लागि तिनीहरू अत्यन्तै व्याकुल हुन्छन्, र मेरो हृदयमा के छ सो तिनीहरूले बुझ्दैनन्। तिमीहरू मेरो बोझमा सहभागी हुन सक र मेरो परिवारको व्यवस्थापन गर्न सक भनेर मैले तिमीहरूलाई तालिम दिइरहेको छु। म तिमीहरू चाँडै नै वृद्धि होओ भन्‍ने चाहन्छु ताकि तिमीहरूभन्दा जवान तिमीहरूका भाइहरूलाई तिमीहरूले अगुवाइ गर्न सक्‍नेछौ, ताकि कहिल्यै पनि नछुट्टिने गरी हामी बाबु र छोराहरूको चाँडै नै मिलाप होस्। यसले मेरा अभिप्रायहरूलाई पूरा गर्नेछ। सबै मानिसहरूका निम्ति रहस्यहरू पहिले नै प्रकट गरिसकिएको छ, र कुनै पनि कुरा गुप्त रहँदैन: म—पूर्ण परमेश्‍वर स्‍वयम्‌, जोसँग सामान्य मानवता र पूर्ण ईश्‍वरीयता दुवै छ—आज तिमीहरूको आँखै अघि प्रकट भएको छु। मेरो सम्पूर्ण अस्तित्व (वस्‍त्र, बाहिरी रूप, र शारीरिक रूप) परमेश्‍वर स्‍वयम्‌को सिद्ध प्रकटीकरण हो; यो संसारको सृष्टिदेखि नै मानिसहरूले कल्‍पना गरेको, तर कसैले नदेखेको परमेश्‍वरको व्यक्तित्वको मूर्तरूप यही हो। मेरा कार्यहरू मेरा वचनहरूजस्तै असल हुनुको कारण के हो भने मेरो सामान्य मानवता र पूर्ण ईश्‍वरीयताले एक-अर्काको पूरक बन्छन्; यसको साथै, यसले गर्दा सबै मानिसहरूले सामान्य व्यक्तिमा त्यति अथाह शक्ति लुकेको छ भन्‍ने देख्छन्। तैँले मलाई प्रेम गर्न सक भनेर मलाई साँचो रूपमा विश्‍वास गर्नेहरू हरेकलाई मैले सच्‍चा हृदय दिएको हुनाले तैँले मलाई साँच्चै त्यसरी विश्‍वास गर्छस्। जब म तँलाई निराकरण गर्छु, तब म तँलाई ज्योति दिन्छु र तँलाई अन्तर्दृष्टि दिन्छु, र यसद्वारा नै तैँले मलाई चिन्‍नेछस्। परिणामस्वरूप, मैले तँलाई जसरी निराकरण गरे पनि, तँ भागेर जानेछैनस्; बरु, तँ मेरो बारेमा झन्-झन् निश्‍चित बन्‍नेछस्। जब तँ कमजोर बन्छस्, त्यो पनि मेरो बन्दोबस्तले गर्दा नै हो, र यदि तैँले मलाई छोडिस् भने, तँ मर्नेछस् र सुक्‍नेछस् भन्‍ने यसले तँलाई देखाउँछ। त्यसबाट तैँले म तेरो जीवन हुँ भन्‍ने सिक्‍न सक्छस्। कमजोर बनेपछि तँ दह्रिलो बन्दै जाँदा, तँलाई कमजोर वा दह्रिलो बन्‍ने कार्य तेरो हातको कुरा होइन भन्‍ने तैँले देख्नेछस्; यो पूर्ण रूपमा मेरै हातको कुरा हो।
सबै रहस्यहरू पूर्ण रूपमा प्रकट हुन्छन्। तिमीहरूको भविष्यका क्रियाकलापहरूमा, म तिमीहरूलाई हरेक काममा मेरा निर्देशनहरू दिनेछु। म अस्पष्ट हुनेछैन; म पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुनेछु, र तिमीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा समेत बोल्‍नेछु; ताकि तिमीहरूले काम-कुराहरूको बारेमा आफै मनन गर्नु नपरोस्, नत्र तिमीहरूले मेरो व्यवस्थापनमा बाधा पुर्‍याउछौ। यही कारणले गर्दा म अबदेखि कुनै पनि कुरालाई लुकाइनेछैन भनेर बारम्‍बार जोड दिइरहन्छु।
अघिल्लो: अध्याय ७३
अर्को: अध्याय ७५
तैँले तेरो भ्रष्ट स्वभावलाई फालिसकेपछि अनि सामान्य मानवताले जिउने उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि मात्र तँलाई पूर्ण बनाइनेछ। तैँले अगमवाणी बोल्न...